Aoka isika mba tsy hanao ambanin-javatra amin’ny fanohanana an’i Neny – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Nisy hatrany ny fandraisam-pitenenana nataon’ireo mpitarika tonga teny an-toerana. Ramatoa Vicky izay solontenan’nympivarotra dia nanambara fa ho avy ny fifidianana ka na ho avy na tsia Rajoelina dia izahay sty maintsy miroso. Aoka isika tsy arisarisa hoy izy fa efa samy manetsiketsika ny faritra misy azy avy. Manentana antsika hoy izy mba tsy hanao ambaninjavatra amin’ny fanohanana an’i Neny. Naverina ihany koa ny teniny izay efa nambarany teny an-kianja ny amin’ireo Ct sy Cst avy eto Antananarivo mba ho tonga hamonjy ny kianja. Ny solontenan’ny RCMAndriamatoa George dia nilaza fa vao mainka miha sahirana izahay avy any Antsirabe satria arakaraky ny niakaran’ny vary. Lasa miandry ny vary any an-tsaha ny mponina hoy izy satria hangalarin’ny dahalo. Ankoatra izay dia nambarany fa miakatra an-tanàna ihany koa ny valala amin’izao fotoana izao, ka izay hipetrahany dia potika avokoa. Tsy mandray ny handraikiny hoy izy ny tomponandraikitra any an-toerana. Ny Ct Manoela dia nanambara fa ao anaty fikarakarana fifidianana isika ka rebirebena foana. Manana finoana hoy izy fa 1eur tour dia vitantsika io. Nitatitra ny fahitan’i Neny ny raharaham-pirenena ny tenany. Nilaza i Neny hoy Manoela raha nihaona taminy izahay fa tsy mijery ambony izy fa mijery ny vahoaka aty amabany. Hainy ny mampandroso ny firenena. Nanafatra ny vahoaka ny tenany mba tsy hanaiky ho voavidy vola. Ny solontenan’ny zanak’i Dada avy any Mahajanga Andriamatoa Sidy dia nilaza fa tonga ny fotoana afahantsika maneho hevitra indrindra ny fampandaniana an’i Neny. Ny teninay avy any hoy izy dia 1eur tour dia vita satria betsaka ny zavatra vitan’i Dada tany. Mandeha ny feo amin’izao fotoana izao hoy izy amin’ny kandidà depiote. Izahay ihany no nahavoa antsika tany aloha hoy izy ny hoe : avy any ambony ny fanendrena. Aleo ny vahoaka no hisafidy izay olona fantany fa hiaraka aminy. Ny anay hoy izy dia fandaniana an’i Neny aloha fa manaraka ho azy ny depiote.
AOKA ISIKA TSY HO TAITAITRA AMIN’NY LAINGA AFAFIN’NY FAT
HANDRAY ANJARA AMIN’NY FANOHANANA NY FFKM ISIKA
Auteur Solo Razafy*Publié le 14 mai 2013 Catégories Politique
8 pensées sur “Aoka isika mba tsy hanao ambanin-javatra amin’ny fanohanana an’i Neny”
14 mai 2013 à 19 h 35 min
Aza mandihy tsy afa-tavony isika fa jereo ny fingafingana isan-karazany mety hatao an´i neny.
mba jereo akaiky koa ny fiarovana ny ainy sao varina isika, fa mbola velona anie ireo foza e! izay tsy maty voalav ankibo sy manao izay mbola hanjakany ka hakany ny fitondrana indray.
rehefa manao fomba fijery dia aza mijery izay eo anoloana fotsiny fa jereo ny havia sy havanana, alaivo ambony sy ambany ny zavatra atao, ary alefaso lavitrabe ny fijery .
Fa hono hoy aho Aiza i Maxime ralaiseheno no tsy henoheno intsony, sa efa lasa naman´ny Foza rehefa avy nifanoroka niara nilalao baolina boribory dia mivadibadika eny ihany koa.
Izay, managana , na miantsoa tanora mpanao asa antsitrapo mba hanagana komity sy vondrona hiarao aní neny isam-paritra ,izay halehan´i neny, ary antsoy ireo miaramila legaliste sy ny reserviste izay vonona hiarao azy.
DIEU ECOUTE NOS PRIERES !
Des évènements heureux ont suivis la déclaration par la Mouvance de la candidature de Madame RAVALOMANANA LALAO.Ces évènements n’ont aucun lieu avec cette candidature mais ils ont lieu
—fortuitement pour la déclaration des Forces Armées et de la Police de rester neutres , en dehors des débats électoraux…
—-tandis que la réunion du FFKM a été revu depuis un moment..N’empêche que deux évènements contribuent à détendre le climat politique malsain et très unilatéral du fait que les putschistes n’ont pu décider toute chose sans brandirl, sans utiliser les forces armées pour faire peur ,pour faire avaler les couleuuvres à la Population..
LES VOIES DE L’ETERNEL NOUS SURPRENNENT ..AGREABLEMENT !
Cette position des forces armées et de police constitue une grande avancéee des forces armées et de la police vers la démilitarisation des actes politiques..
Nous remercions ces forces armées et la police pour cette décision importante pour le respect de la démocratie dans le Pays qu’elles ont prisee au moment importun!.
Le FFKM – malgré l’absence du grand interessé par la confrontation avec ceux qui lui en veulent à mort le Président de la République RAVALOMANANA MARC – a réussi à faire passer l’essentiel,auprès de l’assistance ,qui a bien senti que seule l ‘entente entre Les Malgaches après les débats( ny fifanarahana ao aorian’ny adi-hevitra no mamaha olana maro ) peut résoudre de nombreux problèmes..
Certes nombreux ceux qui regrettent l’absence du Président RAVALOMANANA MARC , la majorité de l’assistance souhaite , réclame sa présence lors de la prochaine réunion..
Et certainement cette éxigence de Tous facilitera et accélerer son retour au Pays ici et maintenant pour le soulagement de Tous..
Cette presque unanimité qui éxige sa présence n’ a pu être enregistrée que lors de cette grande messe..: oui les Malgaches ou ceux qui prétendent les représenter ont pu constater la vraie réalité du Pays : Ce Pays et les Malgaches ne peuvent vivre qu’ensemble-l’assymétrie et l’unilatéralité étrangères car artificielles..Et que les Malgaches veulent débattre et après adopter ny teny tfampierana sy ny teny ifanomezana..!
La neutralité des forces armées et de la police et la liberté d’expression e, de parole et de réunion des Malgaches rassemblés pour faire triomher nos lans socio-économiqueq pour la rénovation du Pays et pour l’améloration urgente du niveau de vie des Malgaches..
OUI DIEU FCOUTE NOS PRIERES ET NOUS PROTEGE DE L’ESPRIT DU MAL QHJ ANIME DES MALGACHES ANTI- NATIONAUX..MARIONNETTES DES ETRANGERS..
Lasa izao ry zareo!
Alefa Ramatoa Lalao Ravalomanana.
Tsara ho fantatry ny rehetra fa nandritra ny sesin-tany tany afrika atsimo dia nianatra « sciences-po » izy.Ny dikan’izany dia ananany na « bagages » na « accessoires ».Sady tia tanindrazana no mahay.Tsy ohatran’i bitrodia izay hangalam-bato tokony ka tokony homanina dieny izao ny fametrahana olona sy ny fanaparitahana andraikitra isan-tsokajiny
Vao fanobohana izao:
Manohana ny hevitrao ry Fanamarihana.
I Guy Ralaiseheno indray dia » voky izy dia natory ô!
….tsa mipody koa Ratsimilaho a!
Tena mila mailto isika fa i Neny tsy handresy izany raha tsy tena miasa tsara isika. Ary dieny izao dia manomboka izany. Aiza ohatra ireo birao atao fifidianana ? Mila Atlanta mafy koa ny fiarahana an’i Neny. Fa tsy atao an’izany hoe Andriamanitra no miaro azy izany.
Efa miorina tsikelikely ny komity mpanohana an’i Lalao Ravalomanana any amin’ny fivondronana sasany ihany.Tohizo e!Mankasitraka.
Ka i Neny anie hitondra ny anajara birikiny, isika hitondra/hitaona vato…. Vita ny trano, ny ambony aingokaingony fotsiny…
Efa mihetsiketsika fatratra hono any @ Fokotany rehetra any Lazalazao fa ny
olana kely dia ilay KITAPO LATSAKA TAMPOKA, any amindry zareo mantsy ny
vola @’izao, fa io ISIKA TSIRAIRAY no antony sisa.
TOKONY AHARITRA NY MENA MIRAVIRAVY ALOHA NY REHETRA, AHAY HANDAHA TENA MAFY,
fantatro fa tsy mora ilay izy indrindra @’izao faharerahana izao fa kosa raha mbola mba azo hialana rė
dia mba aoka mba ahatsiaro tena daholo e! mba miangavy tompoko isany ô!efa POTIKA NY HO AVIN’
NY TARANAKA MALAGASY.
Izaho koa aloha dia manohana ilay hoe FANDAMINANA aloha vao fifidianana koa aleo tsy maika indrindra
tokony ho diovina daholo,atomboka any @ fokontany any fa foza daholo anie no mbola loany any e!izay
napetra2 fahatany, koa ireny tokony SOROHANA IN-7 mandifitra olona mihintsy aloha.
Précédent Article précédent : Ravalomanana Marc : Mila mampiseho modely aloha ianareo mpitarika
Suivant Article suivant : Saribakoly fotsiny izany ilay Triumvirat